ကံကောင်းစေသော ကုသိုလ် ၅မျိုး(တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သာသနာပြုရအောင်) - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မောင်မြင့် မှ June 27, 2012 12:56am တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တစ်ပိုင်တစ်နိုင် သာသနာပြုရအောင်။ ရဝေနွယ်-အင်းမ by Shwedagon Pagoda on Friday, December 17, 2010 at 12:45pm ·
စာဖတ်သူ အသင်။ သင့်ကံ ဆိုးနေသလား။? ဒါမှမဟုတ် သိပ်ကံကောင်း နေတယ်လို့ ထင်လား။?
ဒါမှမဟုတ် ကံကောင်းတယ်လဲ မဟုတ် ကံဆိုး တယ်လဲ မဟုတ်ပါဘူးလို့ သတ်မှတ် ထားသလား။? ဘယ်လိုဖြစ်နေနေ မပင်မပန်း ချမ်းချမ်းသာသာ လေး ကုသိုလ် ၅မျိုးကို ဆောင်ရွက်ရင်း … တစ်ဘ၀တာ ကံကောင်းသောသူ၊ နောက်ဘ၀ပေါင်းများစွာ.. ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နိုင်အောင် ကံကိုပြင်လိုက်ပါ။ ၁။ ”၀သဘ ၏ သာမန်ဘ၀” သီဟိုဠ်ရာဇ၀င်မှာ ၀သဘမင်း ဆိုတာ ရှိခဲ့ဖူးးပါတယ်။ မင်းမဖြစ်ခင် သာမန်လူတစ်ယောက် ဘ၀တုန်းက ဦးရီးတော် စစ်သူကြီးဆီမှာ နေရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာ ဟူးရား ပညာရှိတွေက ၀သဘ အမည်ရှိတဲ့ သူဟာ မင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောပြောလာ ကြပါတယ်။ ဒီစကားကြားတော့ လက်ရှိ မင်းလုပ်နေတဲ့ ယသဠာလက မင်းက သီဟိုဠ်ကျွန်းမှာ ၀သဘ အမည်ရတဲ့ သူအားလုံးကို သတ်စေလို့ မိန့် ပါတော့တယ်။ ၂။ အသက်ဘေးက လွတ်ပြီ။ ဒီတော့ စစ်သူကြီးက သူ့ဆီမှာ နေနေတဲ့ ၀သဘ ကို မင်းဆီ အပ်ဖို့ မိန်းမ လုပ်သူကို ပြောပါတယ်။ သူရာထူး တိုးချင်တာလည်း ပါမှာပေါ့။ နံနက်စောစော ရောက်တော့ စစ်သူကြီးက ၀သဘကို အသာခေါ်ပြီး နန်းတော်ကို ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ၀သဘကို သတ်ဖို့ ခေါ်သွားတာ ဆိုတာကို သိတဲ့ စစ်သူကြီး ကတော်က ကွမ်းအလွန်ကြိုက်တဲ့ စစ်သူကြီးအတွက် ထုံးမပါတဲ့ ကွမ်းကို ထည့်ပေး လိုက်ပါတယ်။ စစ်သူကြီး နန်းတော်တံခါးဝ ရောက်လို့ ကွမ်းစားမယ် လုပ်တော့ ထုံးပါမလာတာ တွေ့ပြီး ၀သဘကို အိမ်ပြန် ထုံးယူစေပါတယ်။ ၀သဘ က အိမ်ရောက်တော့ စစ်သူကြီးကတော်က သူ့အကြံအစည် အတိုင်း ဖြစ်လာလို့ ၀မ်းသာအားရနဲ့ ” ၀သဘ၊ သင့်ဦးကြီးက သင့်ကို မင်းကြီးဆီ အပ်ပြီး သတ်မှာ .. ရော့ အသပြာ တစ်ထောင်ယူပြီး လွတ်ရာကို ပြေးပေတော့ ” ဆိုပြီး ထွက်ပြေး ခိုင်းလိုက်ပါ တော့တယ်။ ၃။ စစ်သည်စုရုံးပြီ။ ၀သဘလည်း မင်းနဲ့ဝေးတဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်းမှာ ပုန်းနေပါတယ်။ ရဟန်းတော် တွေကလည်း သူ့ကို ကြည့်ရှု ထားပါတယ်။ ဒီလိုနေရင်းနဲ့ တစ်နေ့မှာ ပညာရှိလူနူတစ်ယောက်က ၀သဘရဲ့ ဇာတာကို ကြည့်ပြီး ” သင်.. မင်းဖြစ်လိမ့်မယ် ” လို့ ဟောလိုက်ပါတယ်။ ဒီစကားကြားတော့ ၀သဘဟာ ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ပဲ ရဲရင့်သတ္တိ ရှိတဲ့ေ နာက်လိုက် ယောက်ျားတွေကို စုရုံပါတယ်။ အတော်အတန် စုမိတော့ ” မုန့်သည် မ သားသည် မုန့်အနားကစ၍ စားရသည် ” ဆိုတဲ့ ရှေးထုံးကို နှလုံးမူပြီး မြို့စွန်ရွာစွန် ကစပြီး သိမ်းပါတယ်။ လိုရင်း ပြောရရင်တော့ နောက်ဆုံးမှာ ၀သဘ မင်းဖြစ်သွားတယ်ပဲ ဆိုပါတော့။ ၄။ နန်းစံသက်ကို တွက်ချက်ခိုင်းတော့ ၀သဘမင်းဖြစ်လာတော့ ဟူးရားပညာတွေကို ဆိတ်ကွယ်ရာခေါ်ပြီး သူ ဘယ်နှနှစ်လောက် နန်းစံရမလဲ ဆိုပြီး တွက်ခိုင်း ပါတော့ တယ်။ ဟူးရား ပညာရှိတွေက တွက်ချက်ပြီး ” ၁၂ နှစ် နန်းစံရမယ် ” လို့ ဟောလိုက်ပါတယ်။ ၀သဘမင်းက ဟူးရားပညာရှိတွေကို အသပြာ ၁ထောင်စီပေးပြီး သည်အကြောင်း ဘယ်သူ့မှ မပြောနဲ့ဆိုပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်။ ၅။ ကုသိုလ်တွေ ပြုပြီ။ အဲဒီနောက် ၀သဘမင်း ဟာ ရဟန်းသံဃာတော်တွေဆီ ဆည်းကပ်ပြီး ” အရှင်ဘုရားတို့၊ မင်းသက် ရှည်ရာရှည်ကြောင်း ကုသိုလ်ကောင်း မှု.များ မရှိဘူးလား ဘုရား .. ” လို့ လျှောက်ထားပါတယ်။ ဒီတော့ သံဃာတော်တွေက - ” ၀သဘမင်းမြတ် ၊ ၁။ ရေစစ်လှူပါ။ ၂။ နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့ ရဟန်းတွေကို ဆေးလှူပါ။ ၃။ ဟောင်းနွမ်းဆွေးမြေ့နေတဲ့ ကျောင်းဟောင်း၊စေတီဟောင်းတွေကို ပြုပြင်ပါ။ ၄။ ငါးပါးသီလကို နေ့စဉ်စောင့်ထိန်းပါ။ ၅။ ၈ရက်ဥပုသ်၊ ၁၅ရက်ဥပုသ်နေ့တိုင်း ၈ပါးသီလ၊ ၉ပါးသီလကို စောင့်ထိမ်းပါ။ မင်းသက်ရှည်လိမ့်မယ် ” လို့ မိန့်လိုက်ပါတယ်။ ၀သဘမင်းလည်း ရဟန်းတော်တွေ လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်း ကောင်းမှု. တွေပြုပါတယ်။ စာထဲမှာတော့ ၀သဘ မင်းပြုတဲ့ ကုသိုလ်တွေ ကောင်းမှုတွေ အများကြီးပဲ ပြထားတယ် ( စာရှည် နေမှာစိုးလို့ ရေးမပြတော့ဘူး။ ) လိုရင်းပြော ရရင်တော့ ၀သဘမင်းဟာ ( ၁၂ နှစ်သာ နန်းစံရမဲ့အစား ) ၄၄-နှစ် နန်းစံခဲ့ရပါတယ်။ ၆။ အတိတ်ကံ နဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကံ ဒီ ၀တ္ထုမှာ အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ၀သဘမင်းဟာ အတိတ်ကံအရ ၁၂နှစ်သာ နန်းစံရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အတိတ်ကံကို ပစ္စုပ္ပန်ကံနဲ့ ပြုပြင် ယူလိုက်တော့ ၄၄-နှစ်တောင် နန်းစံခဲ့ရပါတယ်။ အပိုကြေး အနေနဲ့ ၃၂နှစ် နန်းစံသက် ပိုရခဲ့ပါတယ်။ ၀သဘ မင်းပြုခဲ့တဲ့ ကုသိုလ် ခြောက်မျိုးက အသက်ရှည်ကြောင်း ကုသိုလ်တွေပါ။ သူ့အနေနဲ့ ကတော့ နန်း သက်ရှည်ကြောင်း သီးခြား ကုသိုလ်တွေပေ့ါ။ အဲဒီကုသိုလ်-၆မျိုးကို အောက်ပါ လင်္ကာလေးနဲ့ တွဲမှတ်ထားလိုက်ပါဦး။ ဗဟုသုတ အဖြစ်ပေါ့။ ရေစစ်၊ ဆေး၊ ကျောင်း၊ ဘုရားဟောင်းပြုပြင် ” ပဉ္စင်၊ အဋ္ဌ သီလ ဖြူစင် သက်ရှည်ကြောင်းစု ကောင်းမှု ၆-အင် အခွင့်စိုက် ပြုလိုက် ထာဝစဉ်။ ” ၀သဘ မင်းကတော့ သူနဲ့ အသုံးတည့်မယ် အသက်ရှည်ကြောင်း ကုသိုလ်တွေကို ရွေးပြုပြီး သူ့ကံသူ ပြုပြင်သွားတာပါ။ ၇။ သင်နှင့် ကောင်းကံ ဆိုးကံ အခု စာဖတ်သူတွေ ကတော့ တခြားသော ဘ၀ လိုအပ်ချက်တွေ တခြားသော အဆင်မပြေမှုတွေ ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ – လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ – စီးပွားရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ – ကျန်းမာရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ – ပညာရေး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ – ရာထူးဌာနန္တရ နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ – နိုင်ငံခြားခရီး နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကံဆိုးချင်ဆိုးနေမယ်။ ကြိုက်သလောက် ကံဆိုးနေပါစေ။ နောက်ဆုံး သေချင်လောက်အောင် အထိ ကံဆိုး နေစမ်းပါစေ။ ၀သဘ မင်းဝတ္ထုကို အာရုံပြုပြီး ဆိုးနေတဲ့ကံကို စိတ်ကြိုက် ပြုပြင်ယူလို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အသိလေးကိုပဲ အာရုံပြုပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ၈။ ဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ …အဲဒီတော့ ဘယ်လိုပြုပြင်ယူမလဲ..? အဲဒီ သေချင်လောက်အောင်ထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်၅-မျိုးနဲ့ ပြုပြင် ယူလို့ရပါတယ်။ တိုက်တွန်း စကားအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်ပြုပြင် ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံ ” နင်နေ ငါသွား ” ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကတော့ ၁။ ဒါန ၂။ သီလ ၃။ ဂုဏ်တော် ၄။ မေတ္တာ ၅။ ၀ိပဿနာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကို နေ့စဉ် ဖြစ်စေရမယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြီး နေ့စဉ် ပြုလုပ် သွားဖို့ပါပဲ။ ၉။ ငါးမျိုးကုသိုလ် ဘယ်လိုပြုရမယ်။ ၉-၁။ ဒါန ပထမဆုံးကုသိုလ်က ဒါန ပါ။ ဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာ ရှင်၁သောင်းပြုပေးနိုင်မှ။ ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနိုင်မှ ဒါန မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားကို ရေချမ်း ကပ်လိုက်မယ် ဆိုလည်း ဒါန ဖြစ်သွားတာပါပဲ။ နောက် ကိုယ်ထမင်းချက်မယ့် ဆန်ထဲက လက်တစ်ဆုတ်စာလောက်နှိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့က စာကလေးတွေ ခိုကလေးတွေကို ပစ်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါနဖြစ်သွားတာပါပဲ။ ဆန်လက်တစ်ဆုတ် လောက်နဲ့တော့ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းကို သိပ်ပြီးလည်း မထိခိုက်စေပါဘူး။ နေ့စဉ် လက်တစ်ဆုတ် စာလောက် စာကလေးတွေကို ကျွေးနေမယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဝန် ကိုယ့်အားနဲ့ မျှတဲ့ ဒါန ဖြစ်နေတာပါ။ ၉-၂။ သီလ ဒုတိယက သီလ ပါ။ သီလမှာလည်း လောကီ ထဲမှာနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အတွက် ငါးပါးသီလလောက် လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်း လိုက်နိုင်တယ် ဆိုရင်ပဲ တော်တော် လုံလောက်နေပါပြီ။ တစ်ဆင့်တက်ပြီး ဥပုသ်နေ့တွေမှာ ၈ပါးသီလ၊ ၉ပါးသီလကို စောင့်ထိန်း နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။ သီလကို စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက် သီလကလည်း ကိုယ့်ကို သူ့သတ္တိ အားလျော်စွာ ပြန်စောင့်ရှောက် ပါလိမ့်မယ်။ ၉-၃။ ဂုဏ်တော် တတိယက ဂုဏ်တော်ပါ။ ဂုဏ်တော် ၉-ပါးထဲက ကိုယ်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုခုကို ပွားလို့ရပါတယ်။ အရဟံဂုဏ်တော်ကိုပဲ … အရဟံ = ပူဇော်အထူးကို ခံယူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား အရဟံ = ကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား အရဟံ = ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို ပြုတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရား လို့ ပွားများရပါတယ်။ အရဟံ ဆိုတဲ့ ပါဠိလေးရယ်။ အရဟံရဲ့ နောက်က အနက်သုံးမျိုးရယ်က ပွားလို့ ဆင်ခြင်လို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ ပါဠိနဲ့အနက်လေးတွေပါ။ ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အတွက် ဂုဏ်တော်က သူ့သတ္တိအားလျော်စွာ ပြန်စောင့်ရှောက်နေ ပါလိမ့်မယ်။ ၉-၄။ မေတ္တာ စတုတ္ထက မေတ္တာပါ။ မေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာ ပွားနည်းတွေကတော့ သီသန့်အကျယ်ကို ရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ မေတ္တာ အတွေးများ စာအုပ်မှာလည်း ပွားပုံ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပြထားပါတယ်။ မေတ္တာပွားတဲ့ နေရာမှာ အဓိက အကြံပေးချင် တာတော့ ပထမ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးရှိတဲ့ ကျေးဇူးများတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို တစ်ယောက်ချင်း ကုန်အောင်ပွားပါ။ ပြီးရင် နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ၊ ကိုယ်စောင့်နတ်-အိမ်စောင့်နတ် ကစပြီး၊ လမ်းမြို့နယ်၊ မြို့၊ နိုင်ငံကို စောင့်ရှောက်နေကြသော နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ အားလုံး ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲ ကင်းပါစေ၊ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပါစေ… စသည်ဖြင့် ပေါ့လေ။ ၉-၅။ ၀ိပဿနာ နောက်ဆုံးက ၀ိပဿနာပါ။ ၀ိပဿနာ ကတော့ ကိုယ်အားထုတ်ဖူးရာ-ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာ ကိုယ့် အာစရိယ ၀ါဒအတိုင်း မှတ်ယူလို့ ရပါတယ်။ ( မည်သည့် တရားစခန်း မည်သည့် အာစရိယ၀ါဒမျှ သင်ကြားထားခြင်း မရှိသူများအဖို့ အစပိုင်းတွင် တင်ပလ္လင်ခွေ(ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေ)ထိုင်၊ ဘယ်လက်ပေါ် ညာလက်ထပ်တင်၊ ခါး-လည်ပင်း-ဦးခေါင်းကို မတ်မတ်ထား၊ အသက်ကို ပုံမှန်ရှူလျှက် ၀င်လေ၀င်လာလျှင် ၀င် လာ သည်ဟု သိပေး၊ ထွက်လေ ထွက်သွားရင် ထွက်သွားသည်ဟု သိပေးခြင်းဖြင့် မိမိစိတ်ကို ထိုထိုနှာသီးဝသို့သာ စူးစိုက်ရောက်ရှိစေရန် ပဏာမ လေ့ကျင့်ကြလျှက် ၇ရက်စခန်း-၁၀ရက်စခန်း စသည်တို့ကို ၀င်ရောက်နိုင်ရန် တိုး၍ ကြိုးစား ကြသင့်ပေသည်။ ) ၁၀။ ကုသိုလ်-၅မျိုး တစ်နေ့တာ ကဲ … စာဖတ်သူ၊ စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ကုသိုလ်၅မျိုးကို စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။ ၁၀-၁။ အိပ်ရာထ မနက် အိပ်ရာက ထတာနဲ့ ကိုယ်လက် သန့်စင်ပြီး မိသားစု ကိစ္စတွေကို ဘာမှ မလုပ်နဲ့ဦး။ ဘုရားခန်းကို အရင်သွားပါ။ ဘုရားသောက်တော်ရေကိုအရင်ကပ်ပါ။ (ဒါန) ကပ်ပြီးရင် ၅ပါးသီလ ခံယူပါ။ (သီလ) အဲဒါပြီးရင် ဂုဏ်တော်ကို ၅-မိနစ် ( ဂုဏ်တော် ) မေတ္တာကို ၅-မိနစ် ပွားပါ။ ( မေတ္တာ ) ပြီးရင် ၀ိပဿနာ ၅-မိနစ် ပွားများပါ။ ( ၀ိပဿနာ ) အင်မတန် နည်းပါးတဲ့ ၁၅မိနစ်အချိန်လောက်တော့ လူတိုင်း လုပ်နိုင်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ( ၅မိနစ်စီ ဆိုသည်မှာ အနည်းဆုံး ပြုရန်အချိန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ ခွန်အားအလိုက် သဒ္ဓါ တရားအလိုက် ၁၀မိနစ်စီ၊ နာရီဝက်စီ၊ တစ်နာရီစီ စသည်ဖြင့် အဓိဋ္ဌာန်ပြု နေ့တစ်နေ့တာရဲ့ အစကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ စလိုက်တာ ဘယ်လောက် ကျက်သရေ ရှိသွားလဲ ။ အိပ်ရာထပြီး နာရီဝက် ၁နာရီအတွင်းမှာပဲ ကုသိုလ်၅မျိုး ရနေပါပြီ။ အဲဒီ ကုသိုလ် ၅မျိုးပြုပြီးမှ မိသားစုကိစ္စ၊ ကိုယ့်ကိစ္စ ဝေယျာဝစ္စတွေကို ပြုလုပ်ပါ။ ၁၀-၂။ နေ့လည် အဲဒီလိုနဲ့ မနက်စာစားပြီးတဲ့ အခါ ဆန်လက်တစ်ဆုတ် စာယူပြီး ခြံရှေ့မှာ ငှက်ကလေးတွေ အတွက် ပက်ကျွေးလိုက်ပါဦး။ ကျွေးပြီးသွားရင် အဆစ်အနေနဲ့ ” ဒီနေ့ မနက် ပြုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်၅မျိုး ကိုလည်း အမျှ ပေးဝေပါတယ်။ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါ။ သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ” ဆိုပြီး နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များနဲ့တကွ ဝေနေယျ အပေါင်းကို အမျှပေးဝေလိုက်ပါဦး။ ၁၀-၃။ ညပိုင်း တတ်နိုင်တယ်။ အချိန်ရတယ်။ သဒ္ဓါတရားလဲ ထက်သန်လာတယ် ဆိုရင် ညပိုင်း ကိုးရီးယားကားလေး မလာခင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုးရီးယားကားလေး ပြီးသွားတဲ့အခါ ကုသိုလ်ငါးမျိုးကို မနက်ကအတိုင်း တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ်လိုက်ပါဦး။ ၁၁။ နေ့စဉ်ပြုအပ်သည် ဒီအတိုင်းသာ နေ့စဉ်ပြုသွားစမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံဟာ တောင်းပန်ပြီး ထွက်သွားဦးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လုပ်-နက်ဖြန်ဖြစ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ တစ်လတန်သည် တစ်နှစ်တန်သည်တော့ စွဲလုပ်ရပါမယ်။ ရက်မပျက်အောင် အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ လုပ်ရပါမယ်။ အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ အင်းအားက ကြီးလွန်းနေရင်တော့ ချက်ခြင်းကြီး ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကုသိုလ် အင်အား ကောင်းလာတာနဲ့ အမျှ ကုသိုလ်အင်အားကို ကြည့်ပြီး လန့်ပြေးသွားမှာပါ။ ဒါက ကံဆိုး နေတဲ့သူတွေကို ပြောတာပါ။ ကံကောင်း နေတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း အမြဲတမ်း ကံကောင်းနေအောင် ကုသိုလ်၅မျိုး နဲ့ အမြဲပြုစု စောင့်ရှောက်နေသင့်ပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်၅မျိုးနဲ့ ကံကောင်းအောင် လုပ်နေတဲ့အတွက် ဒုတိယဘ၀၊ တတိယဘ၀ စသည်တွေမှာလည်း ဆက်ပြီး ကံကောင်းနေဦးမှာပါ။ ၁၂။ ဒုက္ခကြံရင် သစ္စာဆို။ ဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကို ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်ဝ တ်တစ်ခု အနေနဲ့ ပြုရပါမယ်။ အဲဒီလို ပြုနေစဉ် အတွင်းမှာပဲ ဘ၀ အခက်အခဲ တစ်ခု ကြုံလာမယ်၊ ဒါဆို ကိုယ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်၅မျိုးကို နေ့စဉ် အမျှပေးဝေနေတဲ့ နတ်ကောင်းန တ်မြတ်တွေကို တိုင်တည်ပြီး သစ္စာ ဆိုလို့လည်း ရပါတယ်။ ” ကျွန်ှုပ်သည် ကုသိုလ်၅မျိုးကို နေ့စဉ်ပြုပြီး၊ နတ်ကောင်းန တ်မြတ် များကိုလည်း နေ့စဉ် အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ ဤသစ္စာစကား မှန်ကန်ပါက ယခုတွေ့ကြုံနေရသော အခက်အခဲများ ပြေပျောက် ပါစေသတည်း။ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တို့က ကူညီမစတော်မူပါ ” စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ….. ၁၃။ သံသရာကပင် ကျွတ်နိုင်ရဲ့ ကုသိုလ် ၅-မျိုးထဲမှာ ၀ိပဿနာလည်း ပါနေတော့ တရားမှတ်ရင် ပါရမီပါခဲ့ရင် တစ်မဂ် တစ်ဖိုလ်မှသည် လေးမဂ်၊ လေးဖိုလ် အထိ တရားထူးတရားမြတ်တွေ ရသွားပြီး သံသရာဝဋ်က ကျွတ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ ကုသိုလ် ၅မျိုးကို ဘယ်အဆင့်အထိ ပြုရမလဲ … ဆိုရင် ညအိပ်ရာဝင်လို့မှ ဒီနေ့ တစ်နေ့တာအတွက် ကုသိုလ် ၅မျိုး မပြုရသေးရင် အိပ်လို့ လုံးဝမပျော်တဲ့ အဆင့် ချက်ခြင်း ထလုပ်လိုက်မှ အိပ်ပျော်တယ် အိပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်ထိ ပြုလုပ်ကြရပါတယ် … ကဲ …. စာဖတ်သူ … ၊ ကံ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေပါစေ။ ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့သာ နေ့စဉ် ပြုပြင် လိုက်စမ်းပါ။ မကြာခင် ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။ ရေးသားသူ - အရှင်ရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ်- အင်းမ) ကျမ်းကိုး မဟာဝင်ဝတ္ထု - ကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော် ဆရာတော်-အရှင်ရာဇိန္ဒ (ရဝေနွယ်- အင်းမ) က ဆုံးမသလို အားလုံး ကံကောင်းအောင် ဆောင်နိုင်ကြပါစေ.. . လေးစားစွာဖြင့် .... မောင်မြင့်
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 6/26/2012 09:40:00 AM
http://satekuupuyar.blogspot.com/2012/06/blog-post_4360.html Views: 1235
ဘလော့အမျိုးအစား(ဘာသာရေး) Like 24 members like this
myo thet naing သည် October 30, 2012 က 4:42pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ လုပ်ကိုလုပ်မည် Htay Htay သည် October 25, 2012 က 3:43pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျေဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ ကြိုးစား၍ ကျင့်ကြံလိုက်နာပါမညါ။ အမြဲ ကံကောင်းသောသူဖြစ်ချင်ပါသည်။
် szmnaung သည် October 15, 2012 က 10:07pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ I promise, I do it what u show the way of living. myamyamoe သည် October 11, 2012 က 1:38amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မှတ်သားထားပြီးကြိုးစားကြည့်ပါ့မယ် အောင်ဟိန်း သည် October 7, 2012 က 3:38amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဝင်ပြီးဖတ်သွာပါတယ် ကျေဇူအမျာကြီးတင်ပါတယ် Nilar သည် October 3, 2012 က 12:55pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ တကယ်ကိုပြုလုပ်သင့်တဲ့အချက်တွေပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စံပယ် သည် September 28, 2012 က 12:34pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှင့်။ hninwarnyo သည် September 9, 2012 က 12:04amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ထူးခြားမှုကို ခံစားရပါတယ်။ လက်တွေ့လည်းကျင့်နေပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Htin Lin Kyaw သည် September 8, 2012 က 1:12amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်သားပီး ကြိုးစားလုပ်ပါ့မယ် khinnandarkhaing သည် September 6, 2012 က 8:12pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အာရုံစိုက်ပြီးလုပ့်ပါမယ် ‹ Previous
san nyunt ယခု “ ဗုဒ္ဓ ကမ္ဘာ ”ဆိုဒ်ထဲတွင်ရှိနေပါသည်။
“ငါ့ဘ၀ဟာ တကယ်တော့ သူများအတွက် နေခဲ့တာပါ”
"မဟာဗောဓိမြိုင် ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟောကြားတော်မူသည့် " နေရေး၊သေရေး အဖြေပေးဖို့ " တရားတော်"
သက်ပျင်းချ အတွေးတစ်စ နောက်ကွယ်မှာ
ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် အမြတ်ထုတ်နေကြသူများ။
"ဣနြ္ဒိယ သံဝရသီလ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း"
7. တန်ခိုးကြီးဘုရားကို ဖူးဖို့သွားရင် အိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရား အားနာစရာကြီး။
8. "ကိုရင်လေး ပေမယ့် အထင်မသေးစေချင်လို့ပါ"
12. အူမနှင့် သီလ
13. လူဖြစ်ရခြင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ဘာလဲ။
14. “အ၀ီစိငရဲသို့မလွတ်တန်းဆွဲချမည့် အကုသိုလ်ကံ(၆)မျိုး”
15. "အရိယာ လား ? မသိတာ လား ? "
16. သီလညစ်နွမ်းခြင်း၏ အကြောင်းငါးပါး
17. သီလဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ
18. "မေးမြန်းစူးစမ်း၊ဓမ္မလမ်း” (အက်ဒ်မင် ကိုညီညီတင်နှင့် အက်ဒ်မင် ဆရာတော်အရှင်ဝဏ္ဏတို့၏ အင်တာဗျူးအစီအစဉ်)
19. ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်တို့ မလုပ်မနေရသော ကိစ္စများ
20. “တရားထိုင်ခြင်းဟာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါအေးချမ်းစေပါတယ်”
Top News · Everything လှိုင်ကျော်ထွေး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post '(၆)ကြိမ်မြောက် အလှူပွဲအတွက် အသိပေးနိုးဆော်ခြင်း'"အလှူရှင် ကိုအောင်ဆန်း မိသားစု မှ ကိုရင်ဝတ် သင်္ကန်း(၂) စုံ စာအတွက် ငွေကျပ်-၁၃၀၀၀/-(ကျပ် တစ်သောင်း…"1 hour agoလှိုင်ကျော်ထွေး leftacomment for kyawyethant"မိတ်ဆွေကို..ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် ဓမ္မမိသားစု မှ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုပါ၏..။"1 hour agoမူကြိုဆရာ သည် ဘလော့တင်သွားပါသည်။“ငါ့ဘ၀ဟာ တကယ်တော့ သူများအတွက် နေခဲ့တာပါ”၀ဋ်ကြွေးကြမ္မာ မလွတ်သာသည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်ခြင်းနဲ့ အမှားကို တောင်းပန်တတ်ခြင်း တွေဟာ မင်္ဂလာရှိတဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ5 more…1 hour agokyawyethant, ashin indobhhasa, အိမ့်သူ and2more joined ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺1 hour agokham liked thein wai's blog post 'ကုသိုလ်ပြုခြင်းနှင့်အတူ ဆုတောင်းချွတ်ချော်မှုများ။'1 hour agokham liked dimplemit's blog post 'သီလညစ်နွမ်းခြင်း၏ အကြောင်းငါးပါး'1 hour agoဓနုလေးဖိုးအော် liked thein wai's blog post 'ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် အမြတ်ထုတ်နေကြသူများ။'2 hours agoThet Thet Oo and ၄၄၂ဇော်နိုင် are now friends2 hours agoThet Thet Oo commented on thein wai's blog post 'ဘာသာရေးကို ခုတုံးလုပ် အမြတ်ထုတ်နေကြသူများ။'"ကဗျာ လေးကြိုက်လို့ ကူးယူ အသုံးပြုပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါရှင့်"2 hours agoကလေးတို.ဆရာမ commented on Ashin Nandavamsa's blog post 'သက်ပျင်းချ အတွေးတစ်စ နောက်ကွယ်မှာ'"“စကားအခွန်းတိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီ စကားပါနေခဲ့သူတွေရဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးပေါ်ထားတဲ့ အချစ်က…"3 hours agoကိုညီညီတင် leftacomment for uzawana"လေးစားကြည်ညိုရပါသော ဆရာတော်" အရှင်ဇဝန (ကုန်းဇောင်း)" ဘုရား
ရှိသေစွာ ဦးတင် လျှက်…"5 hours agoကိုညီညီတင် commented on ကိုညီညီတင်'s group '"ဓမ္မဒါန ဘလော့ဘ်ရေးသားမျှဝေသူ များ"…သို့ လေးလေးစားစား…ပြန်ကြားလွှာ ကဏ္ဍ'"လေးစားကြည်ညိုရပါသော ဆရာတော်" အရှင်ဇဝန (ကုန်းဇောင်း)" ဘုရား
ရှိသေစွာ ဦးတင် လျှက်…"5 hours ago More... RSS